Myo Thein Electronics | MT Electronics
Myo Thein Electronics
BMB စပီကာ Series များအလိုက် ခံစားနားဆင်နိုင်သော အသံပုံစံများ
BMB စပီကာ Series များ အလိုက် ခံစားနားဆင်နိုင်သော အသံပုံစံများ BMB တွင် ကာရာအိုကေ စပီကာ ကို Series များစွာထုတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ထုတ်လုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ မတူညီသော အသံကို နှစ်သက်သည့် သီဆိုသူများအတွက် ကိုက်ညီမည့် အသံကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို Series များအလိုက် ကွဲပြားသော အသံပုံစံကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးလိုက်ပါသည်။ * Karaoke Speakers * * CSV Series ဈေးနှုန်း နှင့် အသေးစိတ်လေ့လာရန် နှိပ်ပါ  * * * ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးပြင်းထန်သောအသံထွက်အားပေးစွမ်းနိုင်မည့် ကာရာအိုကေစပီကာမျိုးဆက်သစ် CSD...
— June 2018 — 218377 views BMB Karaoke
Array စပီကာဖြစ်ဖို့ ရာ
** စတိတ်ရှိုးအများစုမှာတွေ့ နေတဲ့ အတွဲလိုက်စပီကာတွေကို Array စပီကာ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Array စပီကာဆိုတာ အလုံးရေအများကြီးသုံးရတဲ့အတွက် အလေးချိန်ပေါ့ရမယ် အရွယ်အစားကျစ်လျစ်ရမယ်။ ဒါမှ သယ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ် ချိတ်တဲ့နေရာမှာလဲ လွယ်ကူမြန်ဆန်မယ် အလေးချိန်ပေါ့တဲ့အတွက် အလုံးရေအများကြီးချိတ်ရင် ချိတ်တဲ့နေရာမှာ ဝန်မဖြစ်စေဘူး။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ ရာ ထို Array စပီကာထဲမှာ သုံးထားတဲ့ စပီကာရဲ့ သံလိုက်ကို ပေါ့ပါးပြီး စွမ်းအင်ပြင်းတဲ့ Neodymium (နီယိုဒင်းမီရမ် သံလိုက်) ဖြစ်ရပါမယ်။ သံလိုက်ဆိုတာ အခြားသံလိုက်ကို ထိစရာမလိုဘဲ အကွာအဝေးတစ်ခုကနေ ဆွဲယူနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ တစ်ချို့သံလိုက်အမျိုးအစားသည် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တည်နေပြီး တစ်ချို့ ကတော့ လူကဖန်တီးယူပါတယ်။ သံလိုက်အမျိုးအစား အများကြီးရှိတဲ့...
— February 2018 — 1964 views Array Speakers Differences Magnets
Facts need to know
- Myo Thein Electronics Co.,Ltd
Myo Thein Electronics has been established since 1991. Since it has established, it has been distributing and selling qualified and famous electronics brands until now. It has total5branches in Myanmar’s major cities like Yangon and Mandalay. Its head office is located in Mandalay. It also joined forces with other companies to import and distribute famous brands like Samsung and many others.
Copyright © Myo Thein Electronics Co.,Ltd